Khatarta Ay Keento Caawimada Aan Horumarku La Socon.
Thursday July 22, 2021 - 10:24:18 in Articles by Hadhwanaag News
W/T: Cabdiraxmaan Hayaan
Waxa aynu ku qasabnay waddammada ku jira uruka ganacsiga adduuna (World Trade Organization) inay suuqyadooda u furaan siidhka ma-dhalayska ah ee ay soo saareen shirkadaha Kiimikada sameeya ee adduunku. Waxaynu meesha ka saarnay xaqa ay u leeyihiin inay samaystaan hay’ado u gaar ah innaga oo adeegsanaynna xeerar aynu dajinnay. Taa baddalkeeda waxay xoojinnay hay’adaha waaweyn oo dhammaantood -u dhaqamaya sidii Imbaraadooriyado gaboobay- si aynu u dabbaqno xeerarkeena reer galbeedka. Fadlan Joojiya mannaxaannimada iyo Munaafaqadda.
W/T : C/raxmaan Hayaan